wasiir u O Olalayn Jiray Arimaha Ilalinta Degaanka Horena Wariye Ahaan Jiray oo oo Isagoo waraysi Bixinaya Cadho Awgeed Yidhi Waan is Casilay | Biyoguurenews.com
Home Wararka wasiir u O Olalayn Jiray Arimaha Ilalinta Degaanka Horena Wariye Ahaan...
wasiir u O Olalayn Jiray Arimaha Ilalinta Degaanka Horena Wariye Ahaan Jiray oo oo Isagoo waraysi Bixinaya Cadho Awgeed Yidhi Waan is Casilay
Wasiirkii arrimaha deegaanka ee Faransiiska Nicolas Hulot ayaa xilka iska casilay isagoo si toos ah uga hadlaya idaacad, arrintaas oo noqotay tallaabo habka loogu dhawaaqay uu xitaa aad ula fajacay madaxweyne Emmanuel Macron.
Siyaasigaan oo horay u ahaan jiray wariye Telefishin una doodi jiray xuquuqda deegaanka ayaa sheegay in uu xilka isaga dagay ka dib markii uu ku batay walbahaarka ku aaddan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee wax laga qaban waayay.
Wuxuu ka dhawaajiyay in go’aankiisa ay sabab u noqdeen guul darrooyin uu kala kulmay isku dayo dhowr ah oo uu ku raadinayay in wax laga qabto isbaddalka cimilada.
Mr Hulot ayaa sheegay in uu “kalinimo” ku dareemay dowladda dhexdeeda.
Go’aankan ayuu sheegay inuu isla markaas uu idaacadda ka hadlayay qaatay oo xitaa aysan ka war heynin xaaskiisa.
“Waxaan doonayaa inaan qaato… go’aanka ugu adag nolosheyda” ayuu yiri wasiirka oo si toos ah uga hadlayay wareysi ay la yeelatay idaacadda France Inter.
Wuxuu si kalsooni u yiri “Waxaan qaadanayaa go’aanka aan uga baxayo dowladda.”
Mr Hulot ayaa dhinaca kale xaqiijiyay in uusan arrintaan kala hadlin madaxweyne Emmanuel Macron iyo raysul wasaare Edouard Philippe midna.
Sababta uu ugu sheegi waayay go’aankiisa ayuu ku micneeyay in uu aaminsanyahay haddii uu ku war galin lahaa in ay kala hadli lahaayeen sidii uu uga noqon lahaa.
Mr Hulot ayaa ah qof si weyn caan uga ah dalka Faransiiska waxaana ay wariyeyaasha ka soo warramaya waddankaas sheegayaan in tallaabada uu qaaday ay dhabar jab weyn ku tahay Mr Macron oo taageerada loo hayo ay waqti xaadirkaan aad u liidato.
Af hayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Benjamin Griveaux ayaa sheegay inuu aad uga qoomameynayo is casilaadda Mr Hulot.
“Ma fahmi karo sababta uu xilka uga dagay innagoo guulo fara badan gaarnay sannadkii ugu horreeyay ee aan dowladda maamuleynay, guulahaasna wuxuu ku leeyahay qeyb” ayuu yiri af hayeenka isagoo la hadlayay telefishinka BFM TV.
Is casilaadda wasiirkan ayaa timid hal maalin ka dib markii ay dowladda Faransiiska ku dhawaaqday in ay qafiifisay shuruucdii lagu adkeynayay ugaarsiga xayawaanaadka.
Mr Hulot ayaa sheegay in go’aankan uu ku ogaaday awoodda ay leeyihiin dadka u ololeynayay dabcinta xeerarka ugaarsiga.
Wuxuu sheegay in sidoo kale uu walbahaar ka qaaday” tallaabooyinka yar” ee loo qaaday dhinaca isbaddalka cimilada.
Laakiin wasiirka ayaa sheegay inuu rabay in is casilaaddiisa loo arko qeylo dhaan fadhiga looga kaco.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee tirada ugu badan ee siyaasiyiinta u dooda xuquuqda deegaanka ka dhaadhiciyay in ay dowladdiisa ku soo biiraan, mid ka mid ah dadkaasina wuxuu ahaa wasiirka maanta sida lama filaanka ah isku casilay.
Previous articleDAAWOXukuumad Somaliland oo Diiwaangalinaysa hantida Ama Asadkii ma Guurtada Ahaa ee dawladu Lahayd Wixii hadhay
Next articleGoolkii Ronaldo oo Noqday Goolka Sanadka